Life story of Lukaku (लुकाकुको जीवन कथा: बुबाको पुरानो जुत्ता लगाएर ७६ गोल) || Business Partner Nepal.
HomeKnowledgeLife story of Lukaku (लुकाकुको जीवन कथा: बुबाको पुरानो जुत्ता लगाएर ७६ गोल) || Business Partner Nepal.
Admin 6/22/2018 10:37:00 AM
Romelu Menama Lukaku Bolingoli (born 13 May 1993) isaBelgian professional footballer who plays asastriker for Premier League club Manchester United and the Belgium national team. He is one of only five players to have scored 50 Premier League goals before their 23rd birthday,and the fifth youngest to have scored 100 goals in the competition.At international level he holds the all-time record of 38 goals scored for the Belgian national team.
त्यो दिन म घर आएर सिधै भान्सामा गएँ । आमा फ्रिजको अगाडि दुधको बट्टा लिएर बसिरहनुभएको थियो । सधैँ नै उस्तै हो । तर, त्यो दिन आमा दुधमा केही मिसाएर हल्लाइरहनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले मेरो लागि खाजा ल्याइदिनु भयो । उहाँ सबैकुरा ठीक छ झैँ मुस्कुराइ रहनुभएको थियो ।
तर के भएको रहेछ मैले बुझि हालेँ । उहाँले दुधमा पानी मिसाएर घोल्नुभएको रहेछ । हामी हप्ताभर राम्रो दुध खान सक्ने थिएनौं । आमाले त्यो दिन दुधमा पानी मिसाउनुभएको देखेर मलाई हाम्रो गरिबी थाहा भयो । गरिबी मात्रै होइन हामी टुटेका थियौं ।
मेरा बुबा व्यावसायिक फुटबलर नै हो । तर, उहाँ आफ्नो खेल जीवनको अन्त्यतिर हुनुहुन्थ्यो । सबै पैसा सकिएको थियो । हरेक कुरामा हामी सामान्य भएर बसिरहेका थियौं ।
घरमा टेलिभिजनको केबल छुट्यो । टीभीमा फुटबल हेर्ने बानी छुट्यो । खेल हुने दिनमा पनि यत्तिकै बसिरहेका हुन्थ्यौं । कति समय त बिजुली बत्ती हुँदैन थियो । दुई तीन हप्तासम्म पनि अन्धकारमा बस्नुपर्थ्यो । नुहाउन जाँदा पानी हुँदैनथ्यो । भाँडामा पानी तताएर आमाले सानो कपले टाउकोमा पानी हालिदिनु हुन्थ्यो ।
मेरा आमाले हाम्रा लागि उधारोमा पाउरोटी ल्याउन थाल्नुभयो । पाउरोटी बेच्नेले म र मेरो सानो भाइलाई चिनेको थियो । यसैले शुक्रबारसम्म पैसा तिर्ने गरी सोमबार उसले आमालाई पाउरोटी दिन्थ्यो ।
मलाई थाहा थियो, हामी एकदमै संघर्षमा बाँचिरहेका छौं । तर जब आमाले दुधमा पानी मिसाइरहेको देखेँ, मलाई लाग्यो अब त सबै सकियो । मैले के भन्न खोजेको तपाइँले बुझ्नुभयो होला । यस्तै थियो हाम्रो जीन्दगी ।
त्यो बेला मैले आमालाई केही भनिन् । उहाँलाई चिन्ता हुने केही कुरा म गर्दिनथेँ । मैले चुपचाप खाजा खाएँ । त्यो बेला कसैले मेरो गालामा झापड हानेर बुझाइँदिए जस्तो भएको थियो । भगवान कसम ! त्यही दिन मैले मनमनै सोचिसकेको थिएँ, अब केही गर्नुपर्छ ।
मेरो आमा त्यसरी बाँचिरहेको हेर्न म सक्दैन थिएँ । अहँ सक्दै सक्दैन थिएँ ।
फुटबलमा रहेका मानिसहरु मानसिक शक्तिका बारेमा धेरै कुरा गर्छन् । तपाइँले देखेभरिमा मानसिक रुपमा बलियो व्यक्ति म नै हुँ जस्तो लाग्छ । किनभने आमा र भाइसँग बसेका अँध्यारा दिनहरु मलाई अझै याद छ । हरेक दिन राम्रो दिनका लागि प्रार्थना गर्नु, सोच्नु, विश्वास गर्नु, केही राम्रो हुन्छ भन्ने आश गर्नु ।
केही गर्छु भनेर मैले आफैसँग गरेको वाचा मनमै थियो । एकदिन घर र्फकंदा मैले मेरो आमा रोइरहेको देखेँ । त्यसपछि मैले आमालाई भनि हालेँ, ‘आमा, यो सब फेरिने छ । तपाइँ हेर्दै जानुस् । म एन्डरलेच्टबाट फुटबल खेल्नेछु, यो छिट्टै हुनेछ । हाम्रो दुःखका दिनहरु सकिँदै छन् ।’
म ६ वर्षको थिएँ ।
मैले बुबालाई सोधेँ, तपाइँले कति वर्ष हुँदादेखि व्यावसायिक फुटबल खेल्न थाल्नुभयो ?
उहाँले भन्नुभयो – १६ वर्षको हुँदादेखि
मैले भनेँ – ल ठीक छ, १६ वर्ष
के भने, मेरा लागि हरेक खेल फाइनल जस्तै हो । जब म पार्कको कुनै चौरमा खेलिरहेको हुन्छु, त्यो मेरो फाइनल खेल हो ।
स्कूलमा हुँदा हाफ छुट्टीमा खेल्दा त्यही नै फाइनल खेल हो । जब म बल खेल्छु, एकदमै गम्भीर हुन्छु । हरेक पटक बल हान्दा त्यसको बाहिरी खोल च्यातिओस् जस्तो लाग्छ । त्यही सोचेर पूरा शक्ति लगाएर हानिरहेको हुन्छु ।
म मेरै उमेरका अरुभन्दा अग्लो थिएँ । केही स्कूलका सर र अन्य मान्छेलाई पनि मेरो उमेर अलि धेरै होला भन्ने नै लाग्थ्यो । उनीहरु मलाई बढी उमेरको होला भन्ने कुरामा जोड पनि दिन्थे । पहिलोपटक मलाई कसैले ‘ओइ, त कति वर्षको ? कुन सालमा जन्मेको ल भन त ?’ भनेको कहिल्यै बिर्सन्नँ ।
मलाई के सोध्या होला जस्तो लाग्थ्यो ।
म ११ वर्षको हुँदा लिइर्से क्लबको युथ टिमबाट खेल्न थालेको थिएँ । एकपटक अर्को टिमको खेलाडीको एकजना अभिभावकले मलाई मैदानमा जानबाट रोकिरहेका थिए । ‘यो केटो कति वर्षको हो र ? यसको परिचय पत्र खै ? कहाँबाट आएको यो ?’ तिनले त्यस्तो भनेको मलाई याद छ ।
म सोच्थेँ, म कहाँबाट आएको रे ? के सोधेको यस्तो ? म यहीँ बेल्जियमको एन्टव्रेपमा जन्मिएको हुँ, यहीँको हुँ म ।
मेरो अभिभावक त्यहाँ थिएनन् । किनभने त्यति टाढा जानका लागि मेरो बुबासँग कुनै सवारी साधन थिएन । म एक्लै थिएँ । यसैले मेरो लागि म आफैं बोल्नुपर्ने भयो । झोला राखेको ठाउँमा गएर मैले परिचय पत्र झिकेर ल्याएँ अनि एक अभिभावकलाई हेर्न दिएँ । उनले हेरेर सबैलाई पास गर्दै त्यो परिचय पत्र देखाए ।
त्यो बेला मलाई एकदमै रिस उठ्यो । पख, तिमीहरुको छोरालाई यसरी हराउँछु नि भन्ने भावना मभित्र आइरहेको थियो । तिमीले तिम्रो छोरालाई घर लिएर जाँदा रुँदै जानेछौ भन्ने मेरो मनमा लागेको थियो ।
म बेल्जियन इतिहासकै उत्कृष्ट खेलाडी बन्न चाहन्थेँ । मेरो लक्ष्य नै त्यही थियो, राम्रो र महान होइन, आफ्नो देशकै उत्कृष्ट ।
त्यो समय फुटबल खेल्दा म अलि रिसाहा थिएँ । त्यसमा धेरै कारण छन् । हामी बस्ने अपार्टमेन्टको जताजतै कुदिरहेका मुसा, घरमा केबल टेलिभिजन नभएर हेर्न नपाएको च्याम्पियन्स लिग, अनि … अरुका अभिभावकले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मप्रति गर्ने व्यवहार । यस्तै कुराले मलाई खेलमा रिसाहा बनाइरहेको थियो ।
म एउटा मिसन लिएर बढिरहेको थिएँ । जब म १२ वर्षको थिएँ ३४ खेलमा मैले ७६ गोल गरेको थिएँ । त्यो सबै ७६ गोल मैले मेरो बुबाको पुरानो जुत्ता लगाएर हानेको थिएँ । जब हामीलाई एउटै साइजको जुत्ता मिल्न थाल्यो, मैले बुबाकै जुत्ता लगाएको थिएँ ।
एकदिन मलाई मेरो हजुरबा (आमाको बुबा) ले बोलाउनुभयो । उहाँ मेरो जीवनको एकदमै महत्वपूर्ण मान्छे हुनुहुन्छ । मेरो हजुरबा कंगोको हुनुहुन्छ । उहाँ कंगोमै हुँदा मैले एकपटक फोन गरेको थिएँ, ‘मैले ७६ गोल गरेँ । हामीले लिग जित्यौं । ठूला टिमहरुले मलाई हेरिरहेका छन् ।’
हरेक दिन नै उहाँ मेरो फुटबल खेलबारे सुन्न चाहनु हुन्थ्यो । तर, त्यो दिन उहाँले भन्नुभयो, ल, रोम एकदमै राम्रो गरेछौँ । तिमी मेरो लागि एउटा काम गरिदिन सक्छौ ?’
मैले भनेँ, भन्नुस् न के काम हो ?
उहाँले भन्नुभयो, तिमी मेरो छोरीको ख्याल राख है बाबु
मलाई हजुरबाले के भन्नुभएको होला ? कसको कुरा गर्नुभएको होला जस्तो भयो ।
मैले भनेँ, आमाको कुरा गर्नुभएको ? अँ हामी एकदमै ठीक छौं । राम्ररी बसिरहेका छौँ ।
उहाँले भन्नुभयो, होइन, मलाई वचन देऊ । कसम खाउ कि तिमी मेरो छोरीको राम्ररी ख्याल गर्नेछौ । हस् ?
मैले भनेँ, हुन्छ हजुरबा मैले बुझेँ । वचन दिन्छु म आमाको राम्ररी ख्याल गर्छु ।
त्यसो भनेको पाँच दिनपछि हजुरबा बित्नुभयो । मैले उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भन्ने बल्ल राम्ररी बुझेँ ।
मलाई त्यो सम्झेर एकदमै दुःख लाग्यो । उहाँ चार वर्ष बाँच्नुभएको भए, मैले एन्डरलेच्टमा फुटबल खेलेको हेर्न पाउनु हुन्थ्यो ।
मैले मेरो आमालाई भनेको थिएँ, १६ वर्षको भएपछि एन्डरलेच्टमा खेल्नेछु ।
त्यसका लागि ११ दिन बाँकी थियो ।
सन् २००९, मे २४
प्ले अफको फाइनल खेल । एन्डरलेच्ट भर्सेस स्ट्याडर्ड लिगी ।
त्यो मेरो जीवनको अनौठो दिन हो । सिजन सुरु हुँदा मैले मुस्किलले एन्डरलेच्टको यु-१९ टिमबाट केही खेल खेलेको थिएँ । अझै यु-१९ को नि बेञ्चमै छु, यसरी त मैले कसरी ठूलो टिमबाट म १६ वर्षको हुँदा सम्झौता गर्छु भनेर मलाई चिन्ता परेको थियो ।
यसैले मैले मेरो प्रशिक्षकसँग बाजी लगाएँ ।
मैले उहाँलाई भनेँ, ‘तपाइँले मलाई खेलाउनुभयो भने म डिसेम्बरभन्दा अघि टिमको लागि २५ गोल गर्छु ।
उहाँ मेरो कुरा सुनेर हाँस्नुभयो ।
मैले भनेँ, तपाइँलाई विश्वास लागेन ? ल बाजी थापम न त ।
उहाँले भन्नुभयो, तर तिमीले २५ गोल गरेनौँ भने चाहीँ सधैँ बेञ्चमै हुन्छौ नि ।
मैले भनें, ल ठीक छ । तर मैले जितेँ भने तपाइँले अर्को काम पनि गर्नुपर्छ । खेलाडीहरुलाई घरबाट मैदानसम्म ल्याउने त्यो भ्यान सफा पारिदिनुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ल हुन्छ पक्का ।
मैले भनेँ, अर्को पनि छ । मैले जितेँ भने तपाइँले हामीलाई हरेक दिन केक बनाएर खुवाउनुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ल ल ठीक छ बनाम्ला ।
त्यो मेरो जीवनकै अनौठो बाजी थियो ।
नोबेम्बरमै मैले २५ गोल गरिसकेको थिएँ । अनि हरेक दिन प्रशिक्षकले बनाएको केक खाँदै थियौं हामी ।
एउटा पाठ के भने, एउटा भोकाएको केटोले भनेको कुरालाई कहिल्यै मजाक सोच्नु हुँदैन ।
त्यसपछि मैले एन्डरलेच्टसँग सम्झौता पनि गरेँ । त्यही दिन मैले फिफा भिडियो गेम ल्याएँ र घरमा केबल पनि जोडेँ ।
सिजनको अन्त्य भइसकेको थियो । म घरमै रमाइलो गर्दै बसिरहेको थिएँ । तर, बेल्जियन लिग भने नयाँ ठाउँमा पुगेको थियो । किनभने, लिग सकिँदा पनि एन्डरलेच्ट र स्ट्याडर्ड लिगिको अंक बराबरी भएको थियो । यसैले उपाधिका लागि दुई लेगको प्लेअफ हुँदै थियो ।
पहिलो लेगमा म घरमा बसेर समर्थकले जसरी नै टीभीमा खेल हेरिरहेको थिएँ ।
दोस्रो लेग सुरु हुनु एक दिनअघि प्रशिक्षकले फोन गरेर मलाई बोलाए ।
‘हेल्लो रोम के गर्दै छौ तिमी ?
पार्कमा फुटबल खेल्न निस्किन लागेको म त ।
‘ल ल ल त्यसरी हुँदैन । छिटो झोला मिलाइ हाल त ।’
के भन्नुभाको ? किन र ?
‘हुँदैन हुँदैन तिमी या रंगशाला आइहाल त । तिमी यहाँ टिममा चाहियो ।’
लौ के भन्नुभा ? म ?
‘अँ तिमी । ल आइहाल ।’
प्रशिक्षकसँग फोन गरिसकेर निस्कन लाग्दा म बुबाको कोठामा चिप्लिएर लडेको थिएँ । एकदमै खुशी लाग्यो । ‘केटो अब तेरो दिन आयो भन्ने लागिरहेको थियो ।
म रंगशालामा पुगेँ । सिधै दौडदै डे्रसिङ रुममा गएँ ।
त्यहाँ किटम्यानले भनेका थिए, कुन नम्बरको जर्सी हो तिम्रो ?
मैले भनेँ, १० नम्बरको दिनु न ।
त्यो समय मलाई केही कुराको डर थिएन । सायद डराउनका लागि मेरो उमेर अलि कम नै थियो । मलाई खासै अरु कुराको वास्ता थिएन ।
उनले भने, फुटबल एकेडेमीका खेलाडीहरुलाई ३० कि त्यो भन्दा माथिको जर्सी हुन्छ ।
मैले भनेँ, ल ठीक छ । ३ मा ६ जोड्दा ९ हुन्छ । दामी नम्बर । मलाई ३६ नम्बरको जर्सी दिनुस् ।
त्यो रात खाना खाने बेलामा सिनियर खेलाडीहरुले मलाई गीत गाउन भनेका थिए । कुन गीत गाएँ भन्ने त मलाई याद छैन तर, त्यो बेला गीत गाउँदा मेरो टाउको हल्लिरहेको थियो ।
अर्को दिन बिहान पार्कमा फुटबल खेल्न जान भनेर मेरो साथीहरु घरमा बोलाउन गएका रहेछन् । आमाले ढोका खोलेर म खेल्न गइसकेको भनिदिनु भयो ।
साथीहरुले सोधे, खेल्न ? कहाँ ?
आमाले भन्नुभयो, फाइनल खेल्न ।
हामी होटलबाट बसमा चढेर रंगशाला जाँदै थियौं । सबै खेलाडी सुट पाइन्टमा थिए । म भने ट्रयाक सुट लगाएर गइरहेको थिएँ । बसबाट ओर्लने बित्तिकै टीभी क्यामराहरु मेरो अनुहारमै झोसिएका थिए । त्यहाँबाट लकर रुम जान पनि टाढै रहेछ । म त्यहाँ पुग्नका लागि तीन मिनेट जति हिँड्दा मेरो फोन बजेको बज्यै थियो । ३ मिनेटमा २५ त म्यासेज नै आइसकेको रहेछ । मेरो साथीहरु टीभीमा मलाई हेरेर पागल भएका रहेछन् ।
‘तिमी त्यहाँ फाइनलमा के गर्न गा’को ?’
‘रोम, के हुँदैछ ? तिमी किन टीभीमा ?’
मैले मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई मात्र म्यासेजको रिप्लाइ दिएँ । ‘के भएको हो केही थाहा छैन । म यहाँ छु । खेल्न पाउँछु कि पाउँदिन पनि थाहा छैन । जे होस् टीभी हेर्दै गर ।’
खेलको ६३ औँ मिनेटमा प्रशिक्षकले मलाई मैदान छिराए ।
म एन्डरलेच्टको लागि दौडदै मैदान प्रवेश गरिरहँदा १६ वर्ष ११ दिनको भएको थिएँ ।
फाइनल खेलमा हामी पराजित भयौँ । तर मैले आफूलाई स्वर्ग पुगेको अनुभव गरिरहेको थिएँ । मैले आˆनो आमा र हजुरबालाई दिएको वचन पूरा गर्दै थिएँ । अब सब ठीक हुन्छ भन्ने विश्वास ममा बलियो बन्यो ।
अर्को वर्ष मेरो १२ कक्षा सकिएको पनि थिएन । युरोपा लिग त्यही समय खेल्नुपर्ने थियो । मैले स्कूल जाँदा नै ठूलो झोला बोकेर गएको थिएँ । किनभने, त्यहाँबाट सिधै युरोपा लिग खेल्न एअरपोर्ट जानुपर्ने थियो । त्यो बेला हामीले ठूलो अन्तरमा लिग जितेका थियौँ । साथै अफ्रिकन प्लेयर अफ दि इयरको उपाधिमा पनि म दोस्रो भएको थिएँ ।
मैले त्यो सबै कुरा हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर, यति छिटै होला भन्ने सोचेको थिइनँ । एक्कासी मिडियाहरुमा म छाउन थालेँ । त्यसले मेरा लागि चुनौतीहरु झनै थप्दै गयो । मबाट अपेक्षाहरु पनि बढ्दै गए । विशेष गरी राष्ट्रिय टिममा मबाट अपेक्षा धेरै थियो । तर, खै किन हो मैले राष्ट्रिय टिमबाट राम्रो गर्न सकिरहेको थिइनँ ।
तर, केही छैन । म १७, १८ हुँदै १९ वर्षको भएँ ।
सबै कुरा राम्रै भइरहेको थियो । एकदिन म पत्रिका पढिरहेको थिएँ । त्यहाँ लेखिएको थियो, रोमेलु लुकाकु एक बेल्जियन स्ट्राइकर ।
राम्रो खेल हुन नसकेको बेला पत्रिकाहरुमा पनि रोमेलु लुकाकु कंगोलियन मुलका बेल्जियन स्ट्राइकर लेखिएको हुन्थ्यो ।
यदि तपाइँलाई मेरो खेल मन पर्दैन भने ठीक छ । तर म कंगोको होइन । म यहीँ बेल्जियममा जन्मिएको हुँ । एन्टव्रेपमा हुर्किएको हुँ । मेरो सपना एन्डरलेच्टमा खेल्नेबाट सुरु भएको हो । भिन्सेन्ट कम्पनी जस्तो हुने सपना देखेको हो । म बोल्दा फ्रेन्च शब्दबाट सुरु हुँदै डचसम्म पनि पुग्थेँ । स्पेनिस र पोर्चुगिज हुँदै लिंगाला पनि बोल्थेँ । यो सबै हाम्रो छिमेकीहरु जस्ता छन् उस्तै भएको हो ।
म बेल्जियन हुँ । हामी सबै बेल्नियन हौँ । यही कुराले त एउटा राष्ट्र साचो अर्थमा राष्ट्र बन्छ ।
मेरै देशका केही मान्छे किन म कमजोर भएको, राम्रो नखेलेको हेर्न चाहन्छन् मैले बुझेको छैन । जब म चेल्सीमा गएर बेञ्चमा थिएँ, उनीहरु मलाई हेरेर जिस्काउँथे । जब लोनमा म वेस्टब्रुम गएँ, उनीहरु मलाई हेरेर हाँसिरहेका थिए ।
तर केही छैन, तिनीहरु मैले दुधमा पानी मिसाएर उधारो पाउरोटी खाइरहँदा पनि मसँग थिएनन् । मेरो दुःख दिनमा मसँग नभएका उनीहरुले मलाई कसरी पो बुझुन् ।
तपाइँलाई थाहा छ ? म सानो हुँदा च्याम्पियन्स लिगको १० सिजन मैले टीभीमा पनि हेर्न पाएको थिइनँ । केबल जोड्न नसकेर हामी त्यो हेर्न सक्दैन थियौँ ।
म स्कूलमा जाँदा सबै साथीहरु च्याम्पियन्स लिगबारे कुरा गरिरहेका हुन्थे । मलाई के भएको हो केही थाहा हुँदैन थियो ।
सन् २००२ मा हो, मड्रिडको लिभरकुसनसँग खेल थियो । स्कूलमा सबै जना ‘भलि सट वाउ क्या दामी सट’ भन्दै कुरा गरिरहेका हुन्थे । तर उनीहरुले जे कुरा गसररहेका छन्, त्यो मलाई थाहा छ जस्तै गरी म कुरा गरिदिन्थेँ ।
त्यसको दुई हप्तापछि कम्प्युटरको कक्षा हुँदा मेरो एउटा साथीले भिडियो डाउनलोड गर्‍यो । मैले बल्ल त्यतिबेला हेर्न पाएँ, जिदानले कसरी गोल गरेका रहेछन् । साथीहरुले केसको कुरा गरेका रहेछन् ।
त्यसको केही समय पछि म त्यही साथीको घरमा गएको थिएँ । किनभने २००२ को विश्वकप चलिरहेको थियो । त्यो हेर्न घरमा सम्भव थिएन । रोनाल्डोले कसरी ब्राजिललाई विश्वकप जिताए त्यो मैले हेर्न पाएँ । त्यसअघि सबै कुरा स्कूलमा साथीहरुले भनेको आधारमा मैले बुझिरहेको थिएँ ।
मलाई याद छ, २००२ मा मेरो जुत्तामा प्वाल परेको थियो । ठूलो प्वाल ।
त्यसको १२ वर्षपछि म आफैं विश्वकप खेल्दै थिएँ । अहिले अर्को विश्वकप पनि खेल्दैछु । अनि यसपटक मेरो भाइ पनि मसँगै खेल्दैछ ।
एउटै घरबाट दुईजना उस्तै परिस्थितिको सामना गर्दै विश्वकपका लागि एउटै जर्सीमा ।
यो पटक विश्वकप धेरै रमाइलो हुनेछ । तनाव र चिन्ताहरुका लागि जीवन एकदमै छोटो छ । मान्छेहरुलाई मेरोबारे या मेरो टिमबारे जे पनि भन्ने छुट छ । त्यसले मलाई प्रभाव पार्दैन ।
समय थियो, हामी थिएरी हेनरीलाई टेलिभिजनमा पनि हेर्ने स्थितिमा थिएनौँ । अहिले हेनरी सधैँ हामी सँगै छन् । उनीसँग सिकिरहेका छौँ । म उनीसँग फुटबलबारे धेरै कुरा गरिरहेको हुन्छु ।
मलाई यो सबै हेर्न मेरो हजुरबा यहाँ भइदिनुभएको भए जस्तो लाग्छ । उहाँसँग अझै फोनमा कुरा गर्न मन लाग्छ । म उहाँलाई भन्न सकुँ, हेर्नुस् तपाइँको छोरीको मैले कति राम्ररी ख्याल राखेको छु । तपाइँलाई दिएको वचन पूरा गरेको छु । अहिले हाम्रो अपार्टमेन्टमा मुसाहरु कुद्दैनन् । अहिले भुँइमा सुत्नु परेको छैन । केही चिन्ता छैन । हामी सबै ठीक छौँ ।
अनि … उनीहरुले मेरो परिचय पत्र चेक गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । मलाई चिन्छन् । राम्ररी नै चिन्छन् ।
(लुकाकुले प्लेयर्स टि्रब्युनमा लेखेको लेखमा आधारित)